အရည်အသွေးမြင့်မားမယားစကားပန်ကိတ် Battery ကိုကလောင်
မယားစကားပန်ကိတ် Battery ကိုကလောင်
ဤသည်ပန်ကိတ်နဲ့မယားစကားကလောင်သငျသညျမယားစကားသဘောထားပြင်းထန်ထဖြည့်ပါနှင့်သုညယိုဖိတ်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသော pancakes လောကဓာတ်မှခွင့်ပြုမယ့်ကြီးမားတဲ့ပလပ်စတစ်ကလောင်, ပါ!
♦ Ergonomics ဒီဇိုင်း
လွယ်ကူသော Refill အဘို့အဖြုတ်အောက်ခြေ♦
♦အလွယ်တကူ squeezable ပုလင်း
♦ 29cm အမြင့်
waffles, muffins ရောနှော, ကိတ်မုန့်တွေ, cookies, Donut, Donut ဆို pancake ရောနှောများအတွက်သင့်လျော်သော။
ယင်း၏ဝက်အူ-ထိပ်ဖျားနဲ့ဖြုတ်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ, Refill တစ်ဦးလေပြေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘောပင်တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူသောအဖြစ်သင့်ချက်ပြုတ်အတွေ့အကြုံကိုအောင်မြဲမြံစွာ, ဒါပေမယ့်အလွယ်တကူ squeezable ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိတိကျကျတိုင်းတာခြင်းအမှတ်အသားများလုံးဝရိုးရှင်းပုလင်းထဲမှာ Battery ကိုဖော်စပ်အောင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အပူခံနိုင်ရည် nozzle နဲ့ Ergonomics ဒီဇိုင်းနှင့်ပန်ကိတ်နဲ့မယားစကားကလောင်နှင့်အတူဤပေါင်းစပ်မယားစကားသို့မဟုတ် pancakes အောင်များအတွက်စံပြကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ယင်းမယားစကားပန်ကိတ် Battery ကိုကလောင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်ကြားရေး:
1.Neatly သိုက် Battery ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောငွေပမာဏ
pancakes သို့မဟုတ်အခြားအချိုပွဲအဘို့အ 3.Use လွန်း
အလွယ်တကူ FUN SHAPE pancakes ပြုလုပ်ခြင်း pancake မှိုဖြည့်ဆည်းသို့မဟုတ်တဦးတည်းညှစ်နှင့်အတူဿုံပတ်ပတ်လည် pancakes ကိုဘောပင်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများရောစပ်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
pancakes သို့မဟုတ်အခြားအချိုပွဲအဘို့ကိုသုံးပါ။ Waffles, muffins, Donut, crepes, ကိတ်မုန့်ရောနှောနှင့်ပင်ပီဇာငံပြာရည်: အားလုံးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသုံးပါနှင့်သင့်ရောသမမွှေများထိန်းချုပ်အတွက်ဖြစ်ဖို့သင်ဘက်စုံသုံးရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်ုပ်တို့၏သာသနာအဆို့ရှင်မှတဆင့်ဿုံ fit
ညာဘက်ပုလင်းထဲမှာ Battery ကိုရောမွှေ! ရုံ, အပါဝင်ပစ္စည်းများ add ထိပ်ပေါ်မှာဝက်အူများနှင့်လှုပ်ခါ။ ထိုအခါပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါနဲ့သုံးစွဲဖို့ညှစ်။
တိုင်းတံဆိပ်နှင့်အတူကိတ်မုန့် Battery ကိုသာသနာ
သိုက်သေသပ်စွာတံဆိပ် Battery ကို၏ပြီးပြည့်စုံသောငွေပမာဏကိုဒီသာသနာတိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူကိတ်မုန့် Battery ကိုသာသနာ, ......
ပန်ကိတ်မယားစကား Battery ကိုသာသနာ
ပန်ကိတ်မယားစကား Battery ကိုသာသနာ♦ပြီးပြည့်စုံသောမယားစကား, မုန့်အိုး, တစ်ခုတည်းသောအစေခံအထူးပြုအိုး, ဖြည့်စွက်အဘို့ ......
မယားစကားပန်ကိတ် Battery ကိုကလောင်ဒီပန်ကိတ်နဲ့မယားစကားကလောင်သင်ဖြည့်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်ကြီးမားတဲ့ပလပ်စတစ်ကလောင်ဖြစ်ပါသည် ......
6pcs nozzle နဲ့ 13pcs မှိုနှင့်အတူကိတ်မုန့်အချိုပွဲအလှဆင် Cookie စာနယ်ဇင်း
6pcs nozzle နဲ့ 13pcs မှို♦ Cookie စာနယ်ဇင်းနှင့်အတူကိတ်မုန့်အချိုပွဲအလှဆင် Cookie စာနယ်ဇင်း 13 ရှိတယ် ......